नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा बार्ता असफल – Vision Khabar
नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा बार्ता असफल
। ९ श्रावण २०७५, बुधबार २०:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बिभिन्न चरणको बार्तामा अधिकांश बिषय सहमति नजिक पुगेको भएपनि डा. केसीको बार्ता टोलीले नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा बार्ता असफल बनाएको हो । केसी पक्षधर बार्ता टोलीकै संयोजक डा. अभिशेकराज सिंहले धेरै बिषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए पनि आज दिउसो कांग्रेस नेताहरुले सरकार असफल पार्ने एक मात्र अस्त्र केसीको अनसन भएकोले थप सर्त तेस्र्याएर बार्तामा सहमति नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार केसी पक्षले बार्ता भाँडेर हिडेको सरकारी बार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।
सरकार र डा गोविन्द केसीको वार्ता असफल भएको छ । सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको भन्दै डा केसीको वार्ता टोलीले अब आफूहरुले दिएको सूचीका आधारमा सुधारसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि मात्र वार्तामा बस्ने अडान लिएको छ । सरकार र डा केसीको वार्ता टोलीबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो ।
सरकारले चिकित्सा आयोगमार्फत सवै समस्याको निकास खोज्ने प्रस्तावमा केसी पक्षधर सहमत भइसकेपछि कांग्रेसले बार्ता भाँडन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अनेक बहाना बनाएर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा केसी पक्षले राखेको संशोधनका प्रस्तावमा सरकारी पक्षले कुनै ठोस जवाफ नदिएपछि वार्ता असफल भएको झुटो आरोप लगाएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीले परामर्शका लागि एक घन्टा मागेको थियो । स्रोतका अनुसार टोलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न आग्रह गरेको थियो, जसले सम्वादहीनता अन्त्य गर्न पहल गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा बार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेपछि सरकारबाट ठोश जवाफ नआएको भन्दै केसी पक्षले बार्ता असफल भएको घोषणा गरेर कांग्रेस नेता भेटन पुगको स्रोतले बतायो ।
कांग्रेसकै निर्देशनअनुसार डा केसीको स्वास्थ्य असाध्यै नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष गैरजिम्मेवार बनेको र विधेयकसम्बन्धी दफागत छलफलमा प्रवेश नै गर्न नचाहेको केसीको वार्ता टोलीका संयोजक डा अभिषेकराज सिंहले दावी गर्नुभएको छ । यसअघि सिंहले नै बार्ता अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र धेरै बिषयमा सहमति भएको बताउनु भएको थियो ।
सरकारले सत्याग्रहीको ज्यान जोखिममा पार्ने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका काममा हलो अड्काउने रवैया देखाएको सिंहले आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँलाई बार्तापछि यो अभिब्यत्तिm दिन मंगलवार नै पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापाले निर्देशन दिनुभएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । डा केसीको वार्ता टोलीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता आए मात्र अर्को वार्ता गर्ने सर्त थपेको छ ।
गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेका छन् । हिजो केसी र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । हिजोको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिष्टल थापाथलीमा बैठक बस्यो । सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निश्कर्ष उनीहरुले हिजै निकालेका थिए । आजको वार्तामा केसीका तर्फबाट आएका जीवन क्षत्री र अभिषेक सिंह लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने हिजोको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिके ।
सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमति अनुरुप संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसदमा गइसकेकाले सहमति अनुरुपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव मार्फत केसीका माग अघि बढाउन साझा विवेकशीलका प्रतिनिधिहरु सहमत भएनन् । संसदको प्रक्रिया जेसुकै भए पनि सरकारले अहिले नै संसदले पास गर्ने दस्तावेजमा सहि गर्नु पर्ने जिद्दी गरेका थिए । संसदलाई पनि डिक्टेट गर्नु पर्ने प्रस्ताव साझा विवेकशीलका तर्फबाट आएपछि वार्ता भाँडिएको थियो ।
janatatimes बाट साभर